€ 20 IComposit
I-Cryptohopper yinkampani encinci ehlala kwiNetherlands.
IComposit € 20
Trading Platform i-cryptocurrencies
Iindidi zeeasethi cryptocurrency
I-Cryptohopper yinkampani esencinci esizinze eNetherlands. Inkampani yeyabanini beCryptohopper BV. Inkampani ibonelela ngezixhobo ezininzi ezinceda abathengisi ukuba bafezekise iziphumo ezingcono. Ngoku ka I-Crunchbase, inkampani ayikhange inyuse nayiphi na imali ngaphandle evela kubatyali mali.
Kudliwanondlebe nab Forbes nabazalwana, bathethe malunga nendlela abakwazile ngayo ukuyazisa kunye nokukhulisa inkampani nge-2,000 nje yee-euro. Amalungu e-Cryptohopper anokusebenzisa izixhobo ezininzi ezinikezelwa yinkampani. Banokuthenga ezinye izixhobo kwinkampani yembutho. Abaphuhlisi abavela kwihlabathi liphela banokusebenzisa indawo yentengiso ukuthengisa izixhobo zabo zokurhweba.
Kulula ukuyisebenzisa -Iqonga lewebhu lenzelwe ngokuhombisa, lisenza ukuba kube lula ukuhamba nokusebenzisa.
Ukuhambelana -I-Cryptohopper isebenzisa imodeli ye-API. Kananjalo, iyahambelana notshintshiselwano nge-crypto ngaphezulu kwe-10.
Amakhulu ezixhobo- iicryptohopper's yembutho inezixhobo ezingamakhulu. Abasebenzisi banokufunda uphononongo kubasebenzisi bangaphambili.
Izifundo -I-Cryptohopper ibonelela ngethala leencwadi elipheleleyo le- abaqeqeshiweyo kwizihloko ezininzi.
Inkqubo yokudibana-Inkampani inenkqubo yokubambisana apho abasebenzisi banokufumana ikhomishini kubo bonke abathumeli.
Akukho lwazi lungako lwaziwayo malunga nabasunguli.
Ixesha leentsuku ezisi-7 zokulinga lifutshane.
I-Cryptohopper ayinayo inombolo yefowuni ezinikeleyo.
I-Cryptohopper bot inezinto ezininzi ezinceda bonke abathengisi ukuba bafezekise iziphumo ezingcono. Iimpawu eziphambili zezi:
Urhwebo oluzenzekelayo yenye yezona zinto zidumileyo eWall Street. Ingumbono ovumela abathengisi ukuba bavule kwaye bavale ukurhweba ngokuzenzekelayo xa iiparameter ezithile zifezekisiwe. Ngokusebenzisa ii-algorithms, abarhwebi bayakwazi ukwenza urhwebo nangona bengazithengisi. I-bot ye-Cryptohopper inokuqalisa urhwebo ngendlela efanelekileyo.
Utshintshiselwano kunye nearbitrage yentengiso
I-Cryptohopper inayo udibaniso ngaphezu kwe-70 yokurhweba. Njengoko kuhlala kunjalo, amaxabiso ee-cryptocurrensets awafani kunaniso. Umzekelo, utshintshiselwano oluthile lunokuthengisa i-BTC nge-7,200 yeedola ngelixa enye ithengisa nge-7,100 yeedola. Ke ngoko, i-bot inokukunceda uthathe ithuba lokwahluka kwamaxabiso kwaye uncede ufumane ixabiso elifanelekileyo.
Abarhwebi abakwi-Intanethi ikakhulu benza imali ngayo Ukwenza imarike. Baxhamla ekusasazeni phakathi kwebhidi kwaye babuza amaxabiso eeasethi. I-Cryptohopper bot ineenkqubo ezininzi zokwenza imakethi eziya kukunceda ufumane eyona mpahla intle.
Ukuthengisa isipili sisicwangciso-qhinga sokurhweba esivumela abathengisi ukuba bathenge izicwangciso eziqinisekisiweyo. Oku kwenza ukuba abathengisi abangenamava basebenzise amava eengcali zorhwebo.
Ukuphulukana nokuyeka sisixhobo esibalulekileyo kwintengiso. Isixhobo siyayeka ngokuzenzekelayo urhwebo lokwenza ilahleko kwaye siyithintele ekwenzeni ilahleko engakumbi. Ukulahleka kokuyeka kunemiqobo ethile ngenxa yokuba ayifaki inzuzo. Isixhobo esingcono, esibonelelwa nguCryptohopper ngu indawo yokumisa emva. Ukuyeka kuthatha inzuzo kwaye kunciphisa amathuba okuba semngciphekweni omkhulu ngokubuyela umva.
Ukuthengisa iphepha ikwabizwa ngokuba kukuthengisa idemo. Ikuvumela ukuba urhwebe ngokucula idatha yentengiso ephilayo usebenzisa imali ebonakalayo. Esi sixhobo sibalulekile kubarhwebi abasaqala kwimarike. Ikwanayo ne isixhobo sokubuyela umva oko kukunika idatha eyimbali ukuvavanya isicwangciso sakho.
Utshintshiselwano oluxhaswe nguCryptohopper
I-Cryptohopper ixhasa ezinye zezona zininzi Imali edibeneyo yedijithali utshintshiselwano. Olunye lolu tshintshiselwano ziiHuobi, Kraken, Binance, Coinbase, kunye nePoloniex phakathi kwabanye. Apha ngezantsi kukho olu tshintsho kunye nexesha labo elifanelekileyo.
I-Cryptohopper yenza imali ngeendlela ezimbini. Okokuqala, yenza imali kwiiphakheji zobhaliso ezibonelelayo. Okwesibini, ikwasusa ekuthengisweni kwezixhobo zokuthengisa kwindawo yentengiso. Abathengisi bezixhobo kwindawo yentengiso banoxanduva lokuza nexabiso elifanelekileyo lezixhobo zabo. I-Cryptohopper ineephakeji ezine. Ezi phakheji zezi:
Ubuvulindlela yiphakheji ejolise kubarhwebi abaqalayo. Iphakheji ayihlawulisi mali kangangeentsuku ezisixhenxe. Kwiintsuku ezisixhenxe, abathengisi banakho ukuqala izikhundla ezingama-80, ubuninzi bezi-2 ezibangela, i-1 bot yokuthengisa, kunye nobuninzi bee-15 zemali ezikhethiweyo.
Le phakheji iyafana nephayona. Umahluko kuphela kukuba iphakheji ibiza i-16.58 yeedola ngenyanga xa ihlawulwa rhoqo ngonyaka kunye ne- $ 19 xa ihlawulwe ngenyanga. Amaxesha amaninzi, ababhalisi boovulindlela baya kwi-Explorer emva kwexesha labo lokuvavanywa.
Iphakheji yomdliwo iyafana nephakheji yokuhlola. Umahluko kukuba inani lezikhundla lonyuswe laya ku-200. Ezona zinto zibangela ukwanda ziye zanda zaya kwi-5 kwaye inani leengqekembe lonyuswe laya kwi-50. Ikwabonelela ngenkalo ye-Exchange Arbitrage. Iphakheji iya kwi- $ 41.5 ngenyanga xa ihlawulwe ngonyaka kunye ne- $ 49 xa ihlawulwe ngenyanga.
Le yeyona phakheji ibiza kakhulu ebonelelwa yiCryptohopper. Elona nani liphezulu lezikhundla lenyuka laya kwi-500, inani leemali liyonyuka laya kwi-75, inani lezinto ezonyukayo lonyuka laya kwi-10, kwaye kunikezelwa ngebhotile yokulinganisa. Iphakheji inezinto ezinje ngokwenza imakethi kunye nearbitrage yentengiso. Iphakheji ixabisa i-83.25 yeedola ngenyanga xa ihlawulwa rhoqo ngonyaka kunye ne- $ 99 xa ihlawulwe ngenyanga. Onke amaxabiso awabandakanyi irhafu eyongeziweyo.
Ukuseta iAkhawunti ye-Cryptohopper
Zimbini iiakhawunti eziphambili onokuthi usete kwiCryptohopper. Ungabhalisa njengomrhwebi okanye umthengisi kwindawo yentengiso.
Ukuseta umrhwebi we-Cryptohopper
Inyathelo lokuqala ekufuneka ulwenzile kukutyelela iwebhusayithi. Kwicala elingasekunene lewebhusayithi, uya kubona iqhosha elibhaliweyo Qalisa isilingo sasimahla. Unokucofa indawo ethi Zama ngoku kwiphepha lasekhaya.
Sincoma ukuba uqale ngesilingo sasimahla kwaye uvavanye iqonga. Ukuba iyasebenza, kuya kufuneka ubhalise kwiphakheji yokuhlola esisiseko. Kuya kufuneka uqhubeke nokuphucula iipakeji njengoko usiya uqhelana ngakumbi neqonga.
Emva kokulandela ikhonkco elingentla, uya kusiwa kwiphepha eliboniswe ngezantsi. Kweli phepha, uzakufuna ukufaka ulwazi olusisiseko olufana nedilesi ye-imeyile, igama lomsebenzisi, igama lakho elipheleleyo kunye negama lokugqitha. Eyona nto ibaluleke kakhulu, sicebisa ukuba ufunde ifayile ye- imimmiselo nemiqathango ngaphambi kokuba uqhubeke. Ungawutyeshela umrhumo weendaba. Kwakhona sicebisa ukuba usete iphasiwedi eyomeleleyo.
Emva kokuqinisekisa idilesi ye-imeyile, ungangena kwiakhawunti yakho apho uya kucelwa ukuba ugcwalise iinkcukacha zakho kwiprofayile yakho. Iinkcukacha oza kubuzwa zezi: igama lakho, idilesi, ilizwe, nokuba lishishini okanye iakhawunti yomntu ngamnye, inombolo yakho yefowuni kunye newebhusayithi yakho Kwakhona, unokukhetha ukuseta ukungqinisisa kwezinto ezimbini.
Kweli phepha, ungacwangcisa izaziso ofuna ukuzifumana, ulwimi ofuna ukulusebenzisa, iitshathi ofuna ukuzisebenzisa, nokuba uyafuna ukubhalisela i-beta. Xa ungena okokuqala ngqa, uya kuba nesixhobo esihamba kuwo wonke iqonga.
Iskrini-skrini esingezantsi sibonisa ideshibhodi yeCryptohopper. Eli iya kuba liphepha olibonayo ngalo naliphi na ixesha xa ungena.
Ideshibhodi liphepha lokuqala olibonayo xa ungena kwiakhawunti yakho. Kwideshibhodi, uya kubona ii-odolo ezivulekileyo kunye nendlela abathengisa ngayo. Apha ngezantsi kwee-odolo ezivulekileyo, uya kubona ezinye iinkcukacha malunga nale odolo. Uza kubona izikhundla ezivulekileyo, izithuba ezimfutshane, kunye nemali egciniweyo. Apha ngezantsi, uza kubona ezinye iinkcukacha malunga nezikhundla. Ngamafutshane, ideshibhodi iya kukunika iinkcukacha ezithe vetshe malunga nezikhundla ezivulekileyo nezivaliweyo.
Ngaphantsi kancinci kwithebhu yedashboard ngasekhohlo kwakho yimbali yorhwebo. Oku kukubonisa lonke urhwebo olubekile kwaye uluvalile usebenzisa i-bot. Oku kuyakubonisa imali, isibini semali, uhlobo lworhwebo, isixa otyalomali, umyinge, umrhumo, kunye neziphumo zorhwebo.
Iitshathi zetshathi ziya kukubonisa iitshathi ezivela kutshintsho lwakho olukhethiweyo lwe-crypto. Ungalutshintsha utshintsho kwicala lasekunene letshathi. Umzekelo woku ubonisiwe ngezantsi.
Apha ngezantsi kwetshathi yeetshathi yithebhu yokubuyela umva. Kulapho ubuya khona izicwangciso zakho zokubona ukuba zisebenza njani. Ithebhu yokubuyela umva iboniswe ngezantsi.
Kancinci ngezantsi kwethebhu yokubuyela umva zizicwangciso. Kulapho udala khona izicwangciso zakho. Kulapho uya kubeka khona izicwangciso ozikhuphelayo kwindawo yentengiso.
Ithebhu yentengiso ikuvumela ukuba uthenge ii-algorithms kwintengiso. Okokugqibela, iphepha leapps likuvumela ukuba uqhagamshele i-Cryptohopper kunye nezinye ii -apps zangaphandle ezinje nge-TradingView, iZapier, kunye ne-Autosync.
Unokuba nguMthengisi weCryptohopper
Abathengisi be-Cryptohopper badlala indima ebalulekileyo kuyo yonke indalo. Kungenxa yokuba benza izixhobo ezinokuthi zithengwe ngabasebenzisi kwaye bazisebenzisele ukuthengisa. Inkampani ityhile iqonga lemarike ngexesha lomsitho we-2019 CES eMelika. Kukho amakhulu ezixhobo kwindawo yentengiso kwaye abanye abathengisi babonakala ngathi benza imali entle. Umzekelo, Isicwangciso seNakamoto Unesixhobo esibizwa ngokuba yi-MTA Bear esiya kwi- $ 50. Ngokubhala, iapp ine-1490 yohlolo. Oku kuthetha ukuba wenze ngaphezulu kwe- $ 75k kule app.
Ukuze ube ngumthengisi, kufuneka ulandele eli khonkco kwaye usebenzise. Kwisicelo sakho, inkampani iya kukubuza imibuzo eliqela. Inkqubo ihlala ingqongqo kwaye iyadinisa kuba inkampani ifuna ukufumana ulwazi malunga nawe kangangoko. Ifuna ukuqinisekisa ukuba ubonelela ngezixhobo ezilungileyo kubarhwebi. Nje ukuba uvunyiwe, ungalayisha ialgorithm yakho kwaye uqale ukwenza imali.
Izinketho zokuhlawula i-Cryptohopper
I-Cryptohopper yamkela iindlela ezininzi zokuhlawula. Yamkela amakhadi etyala kunye namatyala, izipaji ezinjengeSkrill kunye nePayPal, kunye nee-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin, Monero, Ripple, ZCash, Litecoin, kunye neDash. Inani elincinci onokuqala ukurhweba ngalo yi-20 euro. Nangona kunjalo, ukunciphisa umngcipheko, inkampani icebisa ukuba uqale malunga nama-euro angama-300.
Ukhathalelo loMthengi weCryptohopper
I-Cryptohopper yenze okuninzi ukuqinisekisa ukuba imibuzo yabathengi iyaphendulwa. Inkampani ibeke indawo ebanzi Imibuzo ebuzwa qho iphepha eliphendula imibuzo emininzi eqhelekileyo. Inkampani inayo iphepha loqhagamshelwano Ifom apho abasebenzisi banokuthumela umbuzo. Ukongeza kuyo yonke le nto, inkampani inamaphepha eendaba ezentlalo apho abasebenzisi banokuthumela imibuzo.
I-Cryptohopper App Android
I-Cryptohopper app iOS
I-Cryptohopper yinkampani ebhaliswe eNetherlands. Nangona kunjalo, inkampani ayilawulwa ngumlawuli wezezimali. Kungenxa yokuba ayifuni kulawulwa kuba ingaboneleli ngeenkonzo zokurhweba.
I-Cryptohopper yenye yeenkampani ezikhula ngokukhawuleza ze-fintech emhlabeni. Abaphuhlisi benze i-webuit enomdla kunye neqonga elihambisayo elinike amandla abathengisi behlabathi ukwenza imali ngokuthengisa ii-cryptocurrensets. Iqonga linceda abantu abangenamava kwintengiso ukuba bathathe inxaxheba kwaye bafezekise inkululeko yezemali. Nangona kunjalo, abasebenzisi bayacelwa ukuba benze umsebenzi omninzi ngaphambi kokuba bawusebenzise kwintengiso yokwenyani. Kuya kufuneka babuyele umva kwizicwangciso okwethutyana. Ukongeza, inkampani yenze iqonga elinika amandla abathengisi ukuba bathengise imiqondiso yabo kubarhwebi behlabathi.